FBS ဘောလုံးခရီးစဉ် နောက်ဆုံး ပြိုင်ပွဲ
FBS ဘောလုံးခရီးစဉ်ကတော့ အောင်မြင်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
FBSရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်လူအများသဘောကျခဲ့ကြပြီး : များပြားလှတဲ့လူထုကြီးက ၂၀၁၈ခုနှစ်ရုရှားတွင်ကျင်းပမည့် အမျှော်လင့်ဆုံးအားကစားပွဲကြီးကို အခမဲ့သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးကိုအနိုင်ရဖို့စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်! အံ့သြစရာမရှိပါဘူး-ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၁/၃ (လူထု ၃ဘီလီယံ!) ဟာဒီပွဲကိုကြည့်ချင်တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြကြပေမယ့် အနည်းငယ်သာကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ရတာပါ။
FBS ဘောလုံးခရီးပွဲစဉ်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် ကံထူးရှင်ကုန်သည်၅၅ဦးဟာဒီပွဲကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခွင့်ရမှာပါ! အလကားနော်!
သင့်တုန့်ပြန်မှုကိုသိချင်နေကြပါပြီ! သင်သဘောကျတဲ့အကြောင်း : ကျွန်ုပ်တို့လူမှုကွန်ယက်(သို့) FBSဝက်ဆိုဒ်ရဲ့တိုက်ရိုက်ပြောလို့ရတဲ့နေရာကနေ ပြိုင်ပွဲအကြောင်းသင့်ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြလိုက်ပါ။
ဘယ်သူသိမှာလဲ? အခွင့်အရေးနဲ့ဒီတစ်ခါလွဲသွားတဲ့သူတွေအတွက်နောက်တစ်ကြိမ်အခွင့်အရေး မကြာခင်ရနိုင်မှာပါ။